Ammaanka yihiin shirkadaha skeidgareeyo korontada waydiinaya su'aalaha ugu wanaagsan? - Jomo Technology Co., Ltd
Iyadoo la tixgelinayo dhisida ee skeidgareeyo ah, laga yaabaa in aad ka fikirin ku saabsan qaar ka mid ah dhinaca horumarinta. Haddii aad jeclaan fikradda ah skeidgareeyo korontada, Laakiin waxa aad u jecel yihiin aad ah Mudanayaasha jooga, waxaad u baahan tahay si ay u eegno Eon: powertrain korontada qaybsan aasaasiga ah. In dunida deg deg ah Diinna sida kuweenna, xawaaraha iyo hufnaan qiimaha waa xubno wax muhiim ah in la eego gaadiidka. Taasi waa. Laakiin sida gaari, xawaare oo kala duwan waa intaasi dheer oo muhiim ah, maxaa yeelay, aad ma ahan oo keliya bartamihii joojin kartaa oo ka qaadaan ilaa ku dhex wadada. Intaa waxaa dheer, haddii aad dhici si hooseysa, oo duudduuban ilaa aad ka joojiso inay dhawraan silbato iska. Waxaa kor ku wajahan leh Xararad fog kuu oggolaanaysa in aad u bilaabaan, joojin iyo bedeli xawaare ah, iyo waxa ay leedahay laba hababka inay meel macaamiisha cusub ama xirfad leh. Waa ay fududahay in la arko sababta dhinacyada kuwan wayn saamayn ugu aqoonta iyo waxqabadka. Waa saaxiibka wanaagsan adventures off-road, si kastaba ha ahaatee ay goori clunky xanibayo ah isticmaalka caadiga ah.
Sidaas waxa sidan u weyn oo lagu skeidgareeyo koronto yar? Waxa kale oo aad ogaan kartaa maamulka fog idinla wada skeidgareeyo maamula korontada. Kariska waxay ahayd qayb ka mid ah dhinaca culus balse ah ayaa sida muuqata la aasaasay fog in dhab ahaantii waxay ahayd caddaalad ah ku xirantaa si uu u qabto, waayo muhiimad qaybta ugu. Ka dib faqri ku dhow 200 oo saacadood cilmi baarista ku jirta noocyada kaamil ah oo lagu daydo ee suuqa, waxaan soo iibsaday ugu sareeya 10 loox ee lagu iibiyo suuqa saxda ah la joogo oo iyaga khuseeya-ilaa-dhinac baaro si loo ogaado taas oo e-skeidgareeyo dhab Sharuucda oo dhan oo iyaga ka mid! Waxaan sameeyey qiimeyn badan skeidgareeyo korontada si aad u ogaato oo looxyada waa mid aad u rullebrett fiican korontada . Skeidgareeyo koronto ka duwan skeidgareeyo caadiga ah by isagoo qayb kaxaynta gaadhi dhigaya isticmaalaya skeidgareeyo danbayntii a a oo dhan halkii ay wax badan ka sahlan, waayo, kii faraska ku cusub iyo bixisaa laad ah oo dhab ah in ay ku joogana khibrad leh. Qiimaha - Sida caadiga ah aasaasiga ah ee suulka, la rullebrett korontada aad hesho waxa aad bixiso.
Wanaagsan. Dhab ahaantii, rullebrett korontada waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee beddelka ee gaadiidka la soo dhaafay Mile. Koowheel adag cilmi soo bandhigay taariikhda Afar wheel Electric skeidgareeyo la motor mataano ah, loo isticmaalo strolling masaafo kooban iyo wixii la mid ah. Taariikhda xawaare caadiga ah ee 30km / h gudahood, nolosha batteriga laga yaabaa in ku saabsan 20 ilaa 25km. Waxaad yeelan doontaa in aad ka akhrisan Dynacraft guudmar skeidgareeyo korontada buuxa halkan. Haddii aad raba in ay qaado dheeldheel cusub ama kaliya fiirin dhirta qabow sallaxa ah, ee rullebrett korontada coolest ayaa halkan si aad u baadhid. Si Loo soo kobo - si aad for deg deg ah, lagu kalsoonaan karo oo kor ku xusan oo dhan aad u raaxo skeidgareeyo korontada, ka dibna ku koowheel 2 jiilka kooboard waa waxa aad Boogaadin! Lagma maarmaan in model ah oo aad ka iibsan waa in aan skimp on yahay doorashada ee hababka saaran pre-set. Qalabka gaadiidka Kuwanu waa la qaadi karo oo waxaa ku shaqeeya by bateri dib loo dabayn taas oo labada waxaa loo isticmaali karaa nooca ugu muhiimsan ee aad ah gaadiidka ama loo isticmaali karo si aad u hesho iyo ka gaadiidka dadweynaha. Longboard Tani buuxa isticmaalaa batari lithium-ra'iyi ah in la hirgaliyo zip dheeraad ah si aad u longboarding xiiso leh, garaacid xawaare ilaa 26 mph (42kph) isticmaalka joogta ah.
Kuwani rullebrett korontada waa u fudud in ay ku kici oo ay isticmaalaan. The rullebrett korontada hoose ayaa lagu asal ahaan loogu talo galay inay la kulmaan oo ku saabsan meelaha la mid ah sida baaskiilada iyo baabuurta. Waxaa jira wax badan oo rullebrett korontada soo baxay ee lagu iibiyo suuqa sida hadda, in ay tahay halkii ay u dhib badan si loo hubiyo guddiga inay koraan xitaa on aragti cidhiidhi ah sida kaliya xawaaraha iyo in kala duwan. Rullebrett Electric siin faa'iidooyin aad u weyn nolosha-style in rag fuula oo laga yaabo dhajisan maalin kasta jeebkayga gelin waaya-aragnimo xiiso. Muhiimad ahaan horumarka ugu badan ee technology u darbay kuwaas rullebrett korontada. Lix miles noqon kartaa kala duwan oo ku filan adopters hore iyo taageerayaasha, ama dadka safaro eego gaaban. Anigu waxaan ahay isha ku heysa inay tanaasul on isagoo xawaare badan ka yar oo u dhaxayn wax dhab qaadi karo.
waqti Post: Mar-07-2018